Efa mpanakanto iraisam-pirenena… : mbola mpanjakan’ny mozika ao Nosy Be i Wawa | NewsMada
Efa mpanakanto iraisam-pirenena… : mbola mpanjakan’ny mozika ao Nosy Be i Wawa
Hafa mihitsy ny seho famaranana ny “Festival Sômaroho!”. Tsy maintsy niavaka tamin’ny maro ny tompony, araka ny nandrasan’ireo mpijery…
Tsy idian-kevitra… Mbola mpanjaka amin’ny mponin’i Nosy Be i Wawa. Rakotra olona ary nifanitsakitro ara-bakiteny tao amin’ny kianjan’Ambodivoanio, ny alin’ny alahady lasa teo. Toa ny isan-taona, olona efa vonona ny hanao fety mandra-maraina ireo, sady hamarana ny “Festival Sômaroho!” andiany fahefatra ihany koa.
Nampiditra tsimoramora ny fety ry Rijade, tovovavy mpanakanto zanak’i Nosy Be ihany, saingy monina any ivelany. Nandimby azy kosa ny mpanjakan’ny salegy, Jaojoby. Mazava loatra fa noraisin’ny mpijery na ireo hira somary vaovao na ireo efa malaza taloha, toy ny “Mangala viavy”, sns.
“Manomboka izao, mpanakanto iraisam-pirenena i Wawa”. Fanambarana nataon’ny filohan’ny komity mpanomana ny “Festival Sômaroho!”, Rajerison Jean Louis io. Ho fanamarihana izany, nomena amboara ity mpanakanto ity, nialoha ny tena nanombohana ny lanonana. Amboara manamarika fa manana ny toerana eo amin’ny sehatry ny tsenan’ny mozika iraisam-pirenena i Wawa.
Toy ireo andiany telo teo aloha, niavaka hatrany ny fidiran’ity mpanakanto zanak’i Nosy Be ity an-tsehatra. Tsy nolanjaina toy ny teo aloha fa naterina fiara miavaka iray, niala tany amin’ny faran’ny kianja ka hatreny anoloan’ny sehatra izy. Nanaiky ho azy nanome lalana ireo mpijery, na efa nifanitsakitro aza, satria nandrasan’izy ireo rahateo izany.
Vantany vao vita ny kabary famaranana, tsy nisy alaharo fa avy dia nifanesy ireo hira mampalaza an’i Wawa. Misy vaovao isan-taona, kanefa hain’ireo mpankafy avokoa izy rehetra.
Ny hany niova tamin’ity, vita aloha ny fampisehoana raha oharina ny tamin’ireo andiany teo aloha. Raha toa ka nisy hatramin’ny 10 ora maraina izany tamin’ny taona lasa, nofaranan’i Wawa maraindraina kosa tamin’ity, noho izy tsy maintsy nanainga nihazo an’i Afrika Atsimo.
Ho avy ry Kassav, P.Square…
“Amin’ny taona ho avy, sady hankalaza ny faha-10 taon’ny tarika no hanamarika ny faha-5 taon’ny Sômaroho isika. Tsy maintsy hiavaka izany. Mampanantena aho fa hanasa an-dry Kassav sy ry P. Square, ka ho hita eo izay ho afaka”. Vaovao lehibe nambaran’i Wawa tamin’ny mponin’i Nosy Be izany.
Sary sy soratra: Zo ny Aina Randriatsiresy
Tsy nilamina ny fikarakarana!
Tsy olona iray na roa no nahatsapa, fa maromaro mihitsy. Raha oharina ny tamin’ny andiany teo aloha, nikorontana ny fikarakarana ny “Festival Sômaroho!” tamin’ity andiany fahefatra ity. Vao ny andro voalohany nanaovana ny “carnaval” sy ny kabary fanokafana dia efa tsapa izany.
Tsy nisy voahaja ny ora rehetra napetraka. Mihemotra hatrany, manaraka izay, ny fiakarana an-tsehatr’ireo tarika, ary nisy mihitsy aza tsy niaka-tsehatra tamin’ny andro voatondro, toa an’i Arnaah sy i Big MJ ny zoma, fa voatery nasisika tamin’ny seho ny asabotsy.
Nisy tamin’ireo mpanakanto ireo no naneho ny alahelony teo amin’izay fandraisana an-tanana izay. Anisan’ireny ny tarika Ejema, nitaraina tamin’ny sakafo, trano fandriana ary fitaterana. Hita maso loatra ny fitongilanana napetraky ny mpikarakara tamin’ireo mpanakanto vahiny sy ireo malagasy.
Tsy ny mpanakanto ihany fa niaina izany lesoka tamin’ny fikarakarana izany koa ireo nantsoina hiasa, toy ny mpanao gazety, teknisianina, sns.
Lafiny fanamafisam-peo, nilatsaka be koa ny kalitao nandritra ny seho telo voalohany. Nambara fa matihanina iraisam-pirenena, nohafarana manokana ireo teknisianina afrikanina, kanefa toa nitsapatsapa ihany ny fahitana azy ireo tamin’ny voalohany. Raha tsy ny seho farany, niakaran’i Wawa, tsy tsapa ilay hatsaran’ny fanamafisam-peo, anisan’ny nampalaza ity mpanakanto ity hatramin’izay.
Tsikaritra tamin’ny kabary famaranana koa fa mitady hidiran’ny mpanao politika ity hetsika ara-kolontsaina malaza ao Nosy Be ity. Niraradraraka ny fisaorana ny filohan’ny Repoblika sy ny solontenany izay tonga teny an-toerana. Tsy nisy tazana akory anefa ireo avy amin’ny minisiteran’ny kolontsaina…
Antenaina fa hanarina ny lesoka ireo tompon’andraikitra izay tazanina toa marobe, ao anatin’ny Somaroho.Comity amin’ny taona ho avy, mba tsy haharatsy laza an’i Wawa, izay hita fa miezaka mampiakatra hatrany ny lentan’ny mozika malagasy.